Global Voices teny Malagasy » Azerbaijan: ilay Toerana Fivahinianana “Death Star” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Febroary 2019 8:21 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika miora
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Azerbaijan, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tsidika
Raha jerena indray mipi-maso izy ity dia toa mahavariana sy mitodika sahady amin'ny hoavy — toerana fivahinianana misy fitoviana be amin'ilay Death Star  hita anatin'ireo horonantsary Star Wars . Mahagaga anefa fa tsy any Las Vegas na koa any Dubai no hatsangana io toerana fivahinianana io, fa kasaina aorina any Baku, renivohitry ny Repoblikan'i Azerbaijan.
Heverin'i Fan IQ fa ezaka hampiakarana ny vintan'i Baku handraisany ireo Lalao Olaimpika amin'ny 2016 io tetikasa io, ary raha izany, mino ilay bilaogy miresaka ny fanatanjahantena fa mety ho nahomby tokoa izany.
Koa na dia mbola lavitra aza ireo Lalao amin'ny 2016, raha tanàna te hampiantrano azy ireo ianao, mila mahay mandamina tsara ny ataonao.
Mibaribary fa mahay mandamina ny #$%@-ny tsara i Baku, ilay renivohitr'i Azerbaijan. Anatin'ny hazakazaka goavana ho an'ireo Lalao amin'ny 2016 ry zareo – izay hambara amin'ny herintaona – ary heveriko fa mitarika amin'izany.
Ka, ry namako, hanangana toerana fivahinianana miainga amin'ilay Death Star avy amin'ny Star Wars ry zareo ho an'ireo Lalao ireo.
Toa variana koa The Geeky Traveler.
Tsy firenena iray loha laharana matetika i Azerbaijan ho an'ireo olona maniry mafy ny hiala sasatra, kanefa miketrika endrikà toerana fivahinianana iray izay mety hisarika ny maso sy ny fahalinana ry zareo. Na dia natao hiova endrika arakaraka ny toerana hijerena azy aza izy io, raha jerena avy eo aloha ilay izy dia hita be ny fitoviany amin'ny Death Star avy amin'ny Star Wars, ary tsy maintsy miteny aho fa raha toa ka mila misidina any noho ny antony maromaro, tena te hijanona ao amin'io toerana fivahinianana Death Star io aho!
Manontany tena kosa anefa The Gadgets Blog raha tsy misy zavatra hafa tsy hita maso miafina ambadik'io toerana fivahinianana mitodika sahady amin'ny hoavy io.
Izaho manokana dia mihevitra fotsiny ihany fa fandrakofana ireo zavatra ho avy io ary mandray ny fepetra mifanaraka amin'izay aho.
Tamin'ny fotoana farany nisian'olona nikasa ny hanangana Death Star, nisy bandy kely iray antsoina hoe Anakin nivezivezy nilaza fa hitondra fifandanjana eo amin'ny hery. Ary fantatsika rehetra ny niafaran'izany.
Raha misy mila ahy, any anaty efitra ambanin'ny tany any Islandy aho hanangona ireo Wookies sy Ewoks .
Ho aminao anie ny Hery.
Mibitabitaka toy izay koa i Gizmodo, saingy avy eo dia nahamarika fahasamihafàna goavana  teo amin'ilay toerana fivahinianana sy ilay toby an'habakabaka manelanelana ireo vahindanitra izay afaka manafoana planeta iray manontolo.
Antsoin-dry zareo hoe “Full Moon” (Fenomanana) ilay izy saingy tsy misy ataony ho vendrana eo: toby mitam-piadiana tanteraka sy am-perinasa tsara enti-miady izy io. Ary tokony hopotehina dieny mbola tsy tara loatra, miaraka amin'ireo andianà mpiady kiritika afaka mitsoaka ireo “turbolaser”-ny sy mametraka baomba protona anatinà fantsona fivoahan-tsetroka. Na mety ho tsia, raha maka ny fomba fijeriny ianao.
Manamarika ihany koa i Vagabondish fa mitsahatra ny fitoviana rehefa vita ny fandinihana, kanefa mamarana ny revirevintsika rehetra amin'ny fizaràna fahalalana izay mety hahaliana tokoa  ireo mpizahatany mety ho avy. Ambaran'io bilaogy io ihany koa fa tsara ny manamarika fa arakaraka ny hisintahanao any atsinanana, no hahitanao endrika maritrano mitodika amin'ny hoavy.
Raha ny tena zava-misy iainana, sy ireo anatiny mampanantena halalaka be – efitrano 382 monja no hiparitaka manerana ireo rihana 35 sy velarana 104,182 metatra toradroa. Mipetraka ambonina kianja miholikolika ny Trano Fivahinianana Full Moon, miaraka aminà atrano fonenana itambaram-be amin'ny ilany roa, antsoina hoe “Palace of Wind 1 sy 2″, anarana tena mety tsara aminy.
Mahaliana ny mahita ny fizotran'ny maro amin'ireny endrika mitodika amin'ny hoavy ireny miantsinanana. Mety hikentrona ireo mpitahiry ny fomban-drazana manoloana ny endrik'io Trano Fivahinianana Full Moon io, miaraka amin'ireo toho-tantely an'arivony misy lafiny enina ao aoriany, kanefa mila manaiky ianao fa miova amin'ireo bongan-tsimenitra mahazatra izay sady avo no maina no tsy misy zavatra mampiavaka azy hita an-kilaometatra maro izany.
Na izany na tsy izany, araka ny tondroin'i  About:Blank, na ho antsoina amin'ny fomba ofisialy hoe Trano Fivahinianana Full Moon Rising izy io na tsia, azo inoana fa ho fantatry ny besinimaro amin'ny hoe “ilay Trano Fivahinianana Death Star” izy io. Na Olaimpika na tsia, mety hisy fivoriambe Star Wars ao Baku. Raha izany, isao ao anatiny aho. Toa milay ilay Trano Fivahinianana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/07/133898/
 Death Star: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_de_la_mort
 Star Wars: https://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
 Wookies : http://starwars.wikia.com/wiki/Wookiee
 nahamarika fahasamihafàna goavana: http://gizmodo.com/361769/death-star-hotel-in-azerbaijan-is-no-moon
 fizaràna fahalalana izay mety hahaliana tokoa: http://www.vagabondish.com/azerbaijans-death-star-hotel/